ပျားရည်နှင့် သံပုရာသီးတို့ သောက်သုံးခြင်းမှ ရရှိနိုင်မည့် ကျန်းမာရေးအကျိုးပြုချက် (၇) ချက်က်ုတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ် – SainPwar
SainPwar > ဗဟုသုတများ > ပျားရည်နှင့် သံပုရာသီးတို့ သောက်သုံးခြင်းမှ ရရှိနိုင်မည့် ကျန်းမာရေးအကျိုးပြုချက် (၇) ချက်က်ုတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်
ပျားရည်နှင့် သံပုရာသီးတို့ သောက်သုံးခြင်းမှ ရရှိနိုင်မည့် ကျန်းမာရေးအကျိုးပြုချက် (၇) ချက်က်ုတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်
သင်ရဲ့ နာမည်မှာ ”K” ပါခဲ့သော်….
ပျားရည်နှင့် သံပုရာသီးကို ရေခပ်နွေးနွေးလေးနဲ့ (သို့) ရေခပ်အေးအေးလေးနဲ့ မနက်ခင်းတစ်ခွက်လောက်သောက်မယ်ဆိုရင်တော့ အောက်ပါအကျိုးကျေးဇူး (၇) ချက်ကို ရရှိနိုင်ပါတယ်
လေထုထဲရှိ အညစ်အကြေးများ၊ ကျန်းမာရေးနှင့် မညီညွတ်သော အစားအသောက်များ၊ စားသောက်နေထိုင်ပုံစနစ်များကြောင့် လူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ မမြင်နိုင်တဲ့ အဆိပ်အတောက်များ ရှိနေပါတယ်။
ပျားရည်နဲ့ သံပုရာရည်ကို ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ သောက်သုံးခြင်းက ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှ အဆိပ်အတောက်များကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်တဲ့ အစွမ်းသတ္တိရှိတဲ့အတွက် အသည်းမှ အဆိပ်အတောက်များကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ခြင်း၊ အရေပြားတွင်းရှိ အဆိပ်အတောက်များကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ခြင်း၊ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှ အဆိပ်အတောက်များကိုလည်း ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။
(၃) အသားအရည်ကို ကြည်လင်တောက်ပစေတယ်
ပျားသံပုရာရည် နွေးနွေးလေးကို သောက်သုံးခြင်းက အသားအရည်ကို ကြည်လင်ဝင်းပစေရုံသာမက ဝက်ခြံထွက်ခြင်း၊ အဖုအပိန့်ထွက်ခြင်းတို့ကို သက်သာစေပါတယ်။ သံပုရာသီးကဆိုရင် အသားအရည်အတွင်းအပြင်ရှိ အဆီပိုများကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပြီး သံပုရာရည်မှ ရရှိနိုင်တဲ့ citric acid က အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် တစ်ချို့က သံပုရာသီးကို အရေပြားပေါ်မှာတိုက်ရိုက်လိမ်းခြင်းကို ပြုလုပ်လေ့ရှိကြပြီး ထိုကဲ့သို့ပြုလုပ်ခြင်းက တစ်ချို့သော အသားအရည်တိုင်းအတွက် အဆင်မပြေပါ။ ဒါပေမဲ့ ရေနွေးလေးနဲ့ ပျားသံပုရာရည်ကို သောက်သုံးခြင်းကတော့ အန္တရာယ်မရှိဘဲ အသားအရည်အတွက် အကျိုးကျေးဇူးများစွာ ရရှိစေနိုင်ပါတယ်။
(၆) လည်ချောင်းနာခြင်းကို ကာကွယ်ပေးတယ်
သံပုရာသီးက လည်ချောင်းထဲရှိ ချွဲ၊ သလိပ်များကို ကင်းစင်စေပြီး လည်ချောင်းတွင်းရှိ ဘတ်တီးရီးယား၊ ဗိုင်းရပ်စ်များကို ဖယ်ရှားပေးတဲ့အတွက် လည်ချောင်းနာခြင်း၊ အာသီးရောင်ခြင်းတို့
ကို ကာကွယ်ကုသပေးနိုင်ပါတယ်။ ချောင်းဆိုနေပါက ပျားသံပုရာရည်နွေးနွေးလေးကို ဂျင်းလေးထည့်ပြီး သောက်ပါကလည်း သက်သာပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်။
Previous Article အများသိနိုင် ပြင်ဆင်နိုင် ကြိုတင်ရွှေ့ပြောင်းထားနိုင်ရန် ရှယ်ပေးပါ….
Next Article အခုလိုခေတ်ကြီးမှာ စိန်ရွှေတွေထက် ရှားသွားပြီဖြစ်တဲ့ လူကောင်းတယောက် (ရှားမှ ရှားပါပဲဗျာ)